[16 / 01 / 2020] Umongameli Erdoğan: I-Eli siya kuyibeka ngokuqinisekileyo imoto yeli lizwe kwinkonzo yesizwe sethu '	06 Ankara
[16 / 01 / 2020] Ukuhamba ngeentsuku zeemviwo ze-OEF e-Istanbul	34 Istanbul
[16 / 01 / 2020] Ukutshintshela phakathi kweebhasi kuya kuba seKocaeli!	41 Kocaeli
[16 / 01 / 2020] Ingxelo yoMphathiswa weZamandla e-Dönmez	06 Ankara
[16 / 01 / 2020] Izaphulelo zeeklasi zeShishini le-YHT zisusiwe	06 Ankara
Usuku: Agasti 26, 2019
Inkqubo yoKhuseleko lweRadar esekwe kwisikhululo senqwelomoya
UHüseyin Keskin, ICandelo loMlawuli oMagunyaziwe weZikhululo zeenqwelo moya (i-DHMİ) kunye noSihlalo weBhodi yaBalawuli babhengeze ukuba Inkqubo yoKhuseleko lwePerimeter esekwe kwisikhululo senqwelomoya sase-Antalya. Yabelana ngeakhawunti ye-Twitter esemthethweni (@dhmihkeskin) [More ...]
Inkqubo ye-Kocaeli Intercity yeeTheminal Drainage System kabusha kweNtsimbi
Ezothutho, omnye wabanxibelelanisi bakaMasipala weNqila yeKocaeli, wenze ubuso babahlali kunye nabathengisi bokugqibela ngezinto ezintsha abazenzileyo ukusukela ngala mhla bathimba iTheminali yaseKocaeli Intercity Bus. Okokugqibela, kwimeko yeemvula ezinkulu, izikhukula ezikhupheleni [More ...]
UMasipala oMbaxa waseAntalya u19 uthuthele amawaka abantu ePlateau
Abemi babonisa umdla omkhulu kwiinkonzo zebhasi ezilungiselelwe nguMasipala wase-Antalya Metropolitan ngesiqubulo esithi 'Ixesha Eliphezulu' elinegalelo kukhenketho lwethafa. Inani elipheleleyo lamawaka e-19 amawaka e-555 afudukele kwimithombo ehlobo. Ezothutho lukaMasipala weNqila [More ...]
Asphalt Ukuhamba eToroslar ukusuka eMersin
UMasipala oMbaxa weMersin uqhubeka nemisebenzi yawo yokwazisa kuzo zonke izithili ngaxeshanye kwiSithili seToroslar. Ngexesha leenyanga zasehlotyeni, abahlali basebenzise iindawo eziphakamileyo njengendawo ezinomkhuhlane [More ...]
USodolophu uBüyükkılıç Uphanda i-Derevenk Viaduct kunye neNdlela zoNxibelelwano
Usodolophu womasipala weDolophu yaseKayseri UMemduh Büyükkılıç uphonononge imisebenzi kwiDerevenk Viaduct kunye neendlela zayo zoqhakamshelwano, eziya kuba yenye yezona ndlela zibalulekileyo zesixeko. Umongameli Büyükkılıç, i-viaduct kunye neendlela zonxibelelwano 29 [More ...]
Ngaba ingeniso yeGebze Metro iza kuba nguMphathiswa?
Ikhomishini ye-CHP yePalamente Sözcüs, Kocaeli uSekela Tahsin Tarhan, ababethwala Gebze Metro yoMphathiswa ukudluliswa kwakusakhiwa Grand National Assembly of Turkey kwi-ajenda mn Commission yePalamente ukuze Industry SözcüUSu, uSekela kaKocaeli [More ...]
I-KAYBİS, elandela ooSodolophu
Usodolophu womasipala weDolophu yaseKayseri UMemduh Büyükkılıç wayeye kwiNtlanganiso yeNgingqi yooRhulumente beNgingqi kunye noVavanyo lweNtlanganiso ebibanjelwe eNevşehir. UMehmet Özhaseki, usekela-mongameli weqela le-AK kwi-Local Government, uthathe inxaxheba kwintlanganiso. [More ...]
Isaphulelo se50 soThutho loLuntu eKayseri
IZiko loNxibelelaniso lwezoThutho kaMasipala waseKayseri Metropolitan (e-UKOME), uluhlu lweerhafu yokuhamba kwabahlali ezidolophini lumiselweyo. Intlawulo yothutho loluntu ekungekho tshintsho lwenziwe kuyo iminyaka emibini isemthethweni ukusuka kwi-26 Agasti 2019 [More ...]
Isitalato iBaşiskele İstiklal senziwa ngokutsha
UMasipala oMbaxa waseKocaeli uyaqhubeka nomsebenzi wokulungisa iindlela kunye nokulungisa esixekweni. Kule meko, isithili se-Başiskele isithili seDoğantepe iNeighborhood İstiklal isitalato sihlengahlengiswa ngumsebenzi obalaseleyo. Imisebenzi eyenziwa liSebe leMicimbi yezeNzululwazi [More ...]
Imisebenzi yokuThutha ukuya kwiSibhedlele saseBursa City iyaqhubeka
Imisebenzi etshisayo yashushu yagqitywa kwicandelo leemitha ze-3 zendlela yokuhamba eyi-3 yokufika eyi-NNUMX eyakhiwe nguMasipala waseBursa Metropolitan ukulungiselela ukuthutha okuhamba kakuhle ukuya kwisibhedlele sesiXeko. Kwi-site jikelele, umntwana wokuzalwa kwabasetyhini, entliziyweni [More ...]
Icandelo loMphathiswa Wezothutho libhengeza 'i-45 ineeprojekthi eziqhubekayo zeminyaka'
Ngokwenkqubo yokutyalomali yoMphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo, uhlahlo-lwabiwo mali lweeprojekthi olucwangcisiweyo ukwakha kulo nyaka alwabelwanga. Inkqubo, i-45 unyaka wonke iiprojekthi eziqhubekayo kufuneka ziqatshelwe. Kwinkqubo yokutyalomali yoMphathiswa Wezothutho kunye nezixhobo, [More ...]
U-Ergün Atalay wanyulwa njengoSihlalo weBhodi yaBalawuli
Turkey Abasebenzi Railway (Iziporo-Business) Union General Ergun Atalay yaphinda yonyulwa kwi-ofisi kaMongameli. I-11 ibibanjelwe kwihotele eSöğütözü. Xa kuvulwa iNdibano ye-Ordinary General izolo, u-Atalay wathi wayengengomgqatswa wolonyulo wabhekisa kubathunywa. [More ...]
Umsebenzi kwiTrabzonqubo Boulevard
UMphathiswa u-Turhan, kwintetho yakhe kumsitho wokuvula owawubanjelwe eTrabzon Atatürk Area ngembeko zika-Mongameli wethu u-Erdoğan, unqwenele inceba kaThixo kwigosa lamapolisa u-Akın Çelebi, ofikelele kwinqanaba lokufela ukholo, kwaye unqwenelele ukunyamezelana nosapho lwakhe ngomonde kunye novelwano. [More ...]
I-UN Ro-Ro iqala inkqubo yokuGuqulwa kwe-DFDS NgeeSevens zayo eziBini zokuhambisa ngeTroy
inkampani enkulu Turkey i-UN Ro-Ro Ro-Ro, yokuthumela yaseYurophu namalungiselelo dfds'y giant uphawu ekuqaleni kwenkqubo yenguqu, bazisa a DFDS isigebenga RO-ro iinqanawa ngakumbi Turkey. I-237 yeemitha ende ende yenqanawa, [More ...]
Ukutshintshela phakathi kweebhasi kuya kuba seKocaeli!
Ividiyo yokuKhuthaza yeBursa Iznik iseA Ankara Metro naseBaşkentray
Iindlela kunye nexesha le-510 kunye ne-525 yeeNdlela zeBhasi eziguqulwe eKocaeli!
IBursa Eskişehir Bilecik Development Agency iya kuqasha abasebenzi abanesivumelwano
I-2828 Umthetho weeNkonzo zeNtlalontle
Umkhenkce wokuBamba waManzi uVulelwe e-Çambaşı Plateau
I-Ordu Boztepe Cable Car yahanjiswa ngabantu abangama-2019 amawaka abakhweli ngo-796
USodolophu uSeecer: 'Imetro ayisiy projekthi yothutho kuphela, kodwa yiprojekthi eza kuguqula isixeko'
Iimoto zaseKhaya zimamela wena ukuba aqonde kwaye uyakufunda
Adnan Ünverdi, uSihlalo weBhodi yaBalawuli be-GSO
Ikhamela yeRhasi yaseTreyini yeloliwe eLungiselela ukuSebenza kweMveliso
I-Fiat Concept Centoventi iboniswe kwi-CES 2020!
Umsebenzi kaZwelonke woLoliwe ku-TÜVASAŞ
Ukufumana indawo yokutshaja yeZithuthi zoMbane zaseKhaya
Castrol Ford Team Turkey, nto leyo eyayikho 2019 igubha Impumelelo
UkuLindelwa kwabantu ukuKhwela kwiZithuthi eziNgozi ku-2030
Okokuqala Hybrid Commercial Iimoto kuveliswa Turkey Road eyeka!
I-Ankara-Sivas YHT Uvavanyo lweLayini yokuThayela ukuQondwa sele ichaziwe